अभिनेता सलमान खानले रणवीरलाई हानेको थप्पडको बलिउडमा अहिले पनि उतिकै चर्चा – Annapurna Post News
May 1, 2022 sujaLeaveaComment on अभिनेता सलमान खानले रणवीरलाई हानेको थप्पडको बलिउडमा अहिले पनि उतिकै चर्चा
एजेन्सी । फिल्म इन्डस्ट्रीमा सेलेब्सको आपसी सम्बन्ध बारम्बार बिग्रदै गएको छ । तर कतिपयमा राम्रो भएको छ, जुन आज पनि उस्तै गरि रहेको छ। दिग्गज अभिनेता ऋषि कपुर आज हामी माझ छैनन् तर उनि संग सम्बन्धित केहि सम्झनाहरु आज पनि हाम्रो दिमागमा रहि रहेको छ । आज हामी त्यसैका केही सम्झनाहरु तपाईहरुसँग सेयर गर्दैछौँ ।
यि सम्झनाहरु मध्ये कोही मिठासले भरिएका छन् त कोही तितो अनुभवले भरिएका छन् । सलमान खान र ऋषि कपुरको सम्बन्धमा चिसोपन आएको बिषयमा आज हामी तपाई लाई बताउन गई रहेका छौ । यति मात्र होइन, यी दुईबीचको सम्बन्धको तनावबाट पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ कि यी दुई एकअर्काका शत्रुसमेत बनेका थिए । मिडिया रिपोर्टका अनुसार रणबीर कपुरले फिल्मी दुनियाँमा पाइला नचाल्दै यी दुईबीचको दुश्मनी सुरु भएको थियो ।
रिपोर्टका अनुसार सलमान र सञ्जय दत्त पबमा पार्टी गरिरहेका थिए । यसैबीच रणवीर कपुर पनि आफ्ना साथीहरूसँग त्यहाँ आएका थिए । तर सलमान र रणवीरबीच केही कुरालाई लिएर झगडा भयो । कुरा झडपसम्म पुग्यो । सलमानले रणवीरलाई थप्पड समेत हानेको बताइएको छ । यो घटनापछि सलीम खानले ऋषि कपूरसँग माफी मागेका थिए, जसपछि यो मामिला सुल्झिएको बताइएको छ । तर, त्यसपछि उनीहरुको सम्बन्धमा फेरि तनाव आयो ।
सलमान र कट्रिनाको ब्रेकअपको कारण रणवीर रहेको बताइएको छ । मिडिया रिपोर्टका अनुसार यसपछि सलमानले सोनमको रिसेप्शन पार्टीमा ऋषि कपूरसँग कुनै खास व्यवहार गरेनन् । ऋषि कपुरले सोहेल खानकी पत्नी सीमा खानलाई यसबारे गुनासो गरे तर सलमानले ऋषीको गुनासो सुनेर उनी रिसाए । त्यतिबेला ऋषि र सलमानबीच के भयो रु
त्यसपछि सलमानले इंडस्ट्रीका केही मानिसलाई मेरो घरमा स्वागत नगर्ने बताएका थिए । यो शत्रुता भएपनि सलमानले ऋषि कपुरको मृत्युको खबर सुनेपछि यो घृणा समाप्त भयो । सलमानले ट्वीट गर्दै भनेका थिए, चिन्टु सर तपाईको आत्माले शान्ति पाओस्, माफ गर्नुहोस्, परिवार र साथीहरूलाई साहस, उज्यालो र शान्ति होस् ।
महत्वपूर्ण सूचना : अर्को हप्ताबाट इन्टरनेट बन्द हुने..किन हुदैछ पुरा पढनुहोला
श्रीमान-श्रीमती बीच से’क्स नहुँदा पनि पिसाबको समस्या हुन सक्छ !
आफ्नी छोरीलाई पहिलोपटक मिडियामा ल्याए धिरेन शाक्यले,के फिल्ममा पनि खेलाउदै छन् उनले ?(भिडियो हेर्नुस्)